विवाह एक नागरिक को जापान । कसरी एक ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्न को लागि आफ्नो नयाँ पति - सबै वकिल जापान मा अनलाइन. सबै भन्दा ठूलो कानूनी पोर्टल को वकिल.
तपाईं छन् भने एक संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक वा स्थायी बासिन्दा जो कसैले विवाह, जापान, र तपाईं चाहनुहुन्छ प्रायोजक आफ्नो जापानी पति वा पत्नी लागि एक संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीन कार्ड (वैध स्थायी निवास), केही महत्त्वपूर्ण कानुनी र व्यावहारिक निर्देशन तल छ । (चेतावनी: यो एक सामान्य सिंहावलोकन कसरी संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यागमन प्रक्रिया काम गर्दछ अधिकांश मान्छे को लागि
आफ्नो स्थिति प्रस्तुत हुन सक्छ जटिलताहरु वा लागि योग्य अपवाद हेर्न एक अनुभवी वकील लागि एक पूर्ण विश्लेषण छ।) सुरु गरौं पृष्ठभूमि को एक बिट मा संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यागमन व्यवस्था छ । विवाह गर्न एक संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक वा वैध स्थायी निवासी दिन्छ विदेशी जन्म व्यक्ति एक प्रत्यक्ष मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यागमन.
विपरीत लोकप्रिय अफवाह, तर, विदेशी राष्ट्रिय गर्दैन तुरुन्तै वा स्वतः प्राप्त गर्न सही सर्ने, न त संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता छ । तपाईं छन् भने एक संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक र पहिले नै विवाहित वा चाँडै हुन, आफ्नो नयाँ पति हुन्छ आफ्नो 'तत्काल नातेदार' भाषा मा संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यागमन कानुन छ । उहाँले वा त्यो प्राप्त हुन सक्छ, एक हरियो कार्ड रूपमा चाँडै तपाईं को दुई सफलतापूर्वक पूरा आवेदन प्रक्रिया जो धेरै महिना लाग्न सक्छ. छैन अझै विवाहित र आफ्नो मङ्गेतर छ, अझै पनि जीवित जापान मा, तपाईं गर्न सक्छन् भने, तपाईं एक संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक, आवेदन लागि आफ्नो भावि पति(ई) मा प्रवेश गर्न, संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक - भिसा प्राप्त गर्न विवाहित छ । आफ्नो नयाँ पति सक्छ त्यसपछि हरियो कार्ड लागि लागू भने, चाहेको छ । विवाह गर्न जापान मा पहिलो वा अर्को देश मा, र त्यसपछि एक आप्रवासी भिसा लागि लागू गर्न जो संग संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश.
यो भिसा को बराबर छ एक हरियो कार्ड । वास्तविक कार्ड पुग्नेछौँ केही सप्ताह पछि आफ्नो त्यसपछि-पति वा संयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रवेश.
तपाईं छन् भने एक न्यायसंगत स्थायी बासिन्दा, आफ्नो नयाँ पति वा हुन्छ एक 'प्राथमिकता नातेदार, श्रेणी मा. भनेर हालतमा आफ्नो जापानी पति प्राप्त गर्न सक्छन् स्थायी निवास संयुक्त राज्य अमेरिका मा पछि मात्र एक 'भिसा नम्बर' (लागि अर्को स्थायी बासिन्दा) भएको छ उपलब्ध छ । त्यो समय मा, उहाँले वा त्यो एक आप्रवासी भिसा लागि लागू (गर्नुहोस् र संयुक्त राज्य अमेरिका). किनभने वार्षिक सीमा को संख्या मा मान्छे प्राप्त गर्न सक्छन् जो मा स्थायी निवास श्रेणी, एक प्रतीक्षा सूची विकसित गरेको छ, मा आधारित एक 'प्राथमिकता मिति. पर्खाइ अक्सर वरिपरि लिन्छ दुई वर्ष । आवेदन प्रक्रिया को लागि एक वैवाहिक आधारित ग्रीन कार्ड समावेश धेरै कदम, सबैभन्दा रह पेश प्रकारका र कागजात र उपस्थित एक साक्षात्कार संग संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यागमन अधिकारीहरूले । उद्देश्य साबित गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यागमन अधिकारीहरूले कि: तपाईं र तपाईंको जापानी भावि पति वा पति सक्छ, तर, अधिक भन्दा, एक विकल्प रूपमा कहाँ र कसरी ठीक गर्न, लागू रूपमा तल वर्णन गरिएको छ । यदि तपाईं र तपाईंको इच्छित पति (बसोबास गर्ने बाहिर संयुक्त राज्य अमेरिका) छ छैन अझै विवाहित वा आयोजित एक अनौपचारिक समारोहमा भनेर गणना गर्दैन रूपमा एक सरकारी विवाह मा स्थान थियो जहाँ आयोजित तपाईं लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ एक - भिसा छ, जो एक अस्थायी (-दिन) भिसा जो संग आफ्नो भावि पति प्रवेश गर्न सक्छन् संयुक्त राज्य अमेरिका मा पकड गर्न विवाह । संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक सुरु गरेर यो प्रक्रिया दाखिल एक भिषा आवेदन फारम म- संग संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता र अध्यागमन सेवा.
पछि अनुमोदन म, यो मामला हस्तान्तरण हुनेछ राष्ट्रिय भिषा केन्द्र मा नयाँ हैम्पशायर, जो अन्ततः हुनेछ पठाउन को मामला मा संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास या त मा टोक्यो वा, जापान । आफ्नो भावि पति लागि लागू हुनेछ, एक - भिसा मार्फत वाणिज्य दुतको कार्यालय.
यो समावेश पेश प्रकारका र कागजात र उपस्थित एक साक्षात्कार संग एक वाणिज्य अधिकारीले भने । तपाईं, माग, अनुमति गर्न यो साक्षात्कार धाउन, तर यो आवश्यक छैन. आफ्नो विवाह पछि संयुक्त राज्य अमेरिका मा, आफ्नो नयाँ पति लागू गर्न को लागि हरियो कार्ड, माध्यम भनिने प्रक्रिया को समायोजन स्थिति छ । तपाईं को दुई धाउन हुनेछ एक हरियो कार्ड साक्षात्कार मा एक स्थानीय कार्यालयको छ । यदि तपाईं र तपाईंको प्रेम एक पहिले नै विवाह छन्, र आफ्नो पति हाल जापान मा, तपाईं सुरु हुनेछ ग्रीन-कार्ड आवेदन प्रक्रिया दाखिल द्वारा फाराम - संग.
यसको उद्देश्य साबित गर्न छ तपाईं साँच्चै छौं विवाहित कि, यो एक विवाह (एक शर्मिंदगी एक ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्न) र छौं कि साँच्चै एक संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक वा स्थायी बासिन्दा छैन । (हेर्नुहोस् तयारी एक म- भिसा आवेदन लागि आप्रवासियों पति वा संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक वा तयारी एक म- भिसा आवेदन लागि आप्रवासियों जोडीलाई एक स्थायी निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका.) स्थायी बासिन्दा को जीवनसाथी प्राप्त गर्न सक्छन् स्थायी निवास मा संयुक्त राज्य अमेरिका पछि मात्र अन्तरिक्ष लागि एक स्थायी बासिन्दा श्रेणी मा उपलब्ध हुन्छ आधारित आफ्नो जोडीलाई 'प्राथमिकता मिति.
यो राम्रो समाचार छ कि समय द्वारा तपाईं प्राप्त अनुमोदन को म, केही, छैन भने सबै को, को पर्खाइ समय बितिसकेका छन् । अर्को, आफ्नो पति वा हुनेछ माध्यम ले जाने कन्सुलर प्रशोधन लागि एक आप्रवासी भिसा. यो साधन आफ्नो पति वा कागजी पेस गर्न, र एक साक्षात्कार मा, एक संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावास टोकियो, जापान । (संयुक्त राज्य अमेरिका माग धाउन सक्छ, तर आवश्यक छैन.) स्वीकृति, आफ्नो पति प्रवेश संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक आप्रवासी भिसा, जो समयमा उहाँले वा त्यो हुन्छ एक वैध स्थायी निवासी छ । शुल्क, हरियो कार्ड मा आइपुग्छ मेल केही हप्ता पछि । तापनि संयुक्त राज्य अमेरिका विभिन्न छ र 'अमेरिकन सेन्टर' मा जापान, केवल एक टोक्यो मा हैंडल आप्रवासी र भावि पति भिसा छ । तपाईं हुनेछ दिइएको निर्देशन (र अन्ततः, एक नियुक्ति सूचना) जब आफ्नो मामला सरुवा गर्न वाणिज्य दुतको कार्यालय मा जापान, र पनि जाँच गर्न सक्छन् दूतावास गरेको वेबसाइट मा जानकारी को लागि.
यदि आफ्नो पति हुनु हुन्छ जीवित मा एक देश भन्दा अन्य, जापान को वाणिज्य दुतको कार्यालय त्यहाँ हुनेछ संभावना को एक मामला ह्यान्डल गर्न छ । यदि आफ्नो पति आए कानुनी तवरमा संयुक्त राज्य अमेरिका, (जस्तै एक भावि पति वा विद्यार्थी भिसा वा एक पर्यटक रूपमा), उहाँले वा त्यो योग्य हुन सक्छ लागू गर्न अवस्था समायोजन गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका मा. तपाईं को दुई धाउन हुनेछ एक साक्षात्कार मा एक को फिल्ड कार्यालय छ । बारेमा जानकारी स्थान वा सेवा केन्द्र मा पाउन सकिन्छ, यसको वेबसाइट छ । (बस निश्चित आफ्नो पति वा थिएन प्रतिबद्ध भिसा धोखाधडी द्वारा प्रयोग भिसा विशेष गरी प्रविष्ट गर्न, संयुक्त राज्य अमेरिका र हरियो कार्ड लागि लागू हेर्न जोखिम को प्रवेश संयुक्त राज्य अमेरिका एक पर्यटक रूपमा, त्यसपछि लागू विवाहको लागि - आधारित ग्रीन कार्ड विवरण लागि.) तपाईं हुनुहुन्छ भने एक संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक हो, यो कुरा छैन भने आफ्नो पति वा पत्नीको मा छ.
कानुनी स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका मा जब तपाईं लागू गर्न समायोजन स्थिति छ । तर तपाईं एक स्थायी निवासी, आफ्नो पति हुनु पर्छ मा कानूनी स्थिति छ । त्यहाँ एक अन्य प्रमुख विचार लागि स्थायी बासिन्दा को जीवनसाथी गर्न चाहने स्थिति समायोजन: पहिले तपाईं लागू गर्न सक्छन्, तपाईं पर्छ पुग्न अगाडि प्रतीक्षा सूची, हामी पहिले उल्लेख गरिएको छ । दुर्भाग्यवश, सरकार सक्छ, तपाईं बताउन छैन जब आफ्नो प्रतीक्षा छ भन्दा. छ, एक वेब पेज कि कसरी बताउँछन् यदि आफ्नो पति वा प्रविष्ट संयुक्त राज्य अमेरिका बिना निरीक्षण वा प्रयोग गरेर एक नक्कली भिसा, वा कहिल्यै भएको, आफ्नो अवस्था भन्दा बढी जटिल छ यो लेख ठेगाना गर्न सक्छन्.
कठिनाई प्राप्त हरियो कार्ड लागि आफ्नो पति वा पत्नीको छ, यद्यपि यो असम्भव छैन । हेर्न एक अध्यागमन वकील लागि विवरण भने वा तपाईं कि बारेमा कुनै प्रश्न छ, तपाईं योग्य अवस्था समायोजन गर्न छ । तपाईं जहाँ कुनै कुरा, विवाह, तपाईं को आवश्यकता हुनेछ एक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न भनेर विश्वस्त संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यागमन अधिकारीहरूले थियो भन्ने कानुनी मान्यता राज्य वा देश जहाँ यो भयो । तल केही सुझाव हो कि गरिरहेको छ । तपाईं भने विवाहित, वा प्राप्त गर्न योजना मा विवाहित आफ्नो भावि पति वा पति घर देश, नजर मा जापानको आवश्यकताहरु लागि कानुनी विवाह । द्वारा प्रदान जानकारी अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्य दुतको कार्यालय, मात्र 'कानुनी' जापानी विवाह नागरिक विवाह दर्ता, जो ठाँउ ले एक जापानी नगर सरकार कार्यालय । जापानी धार्मिक समारोहको आयोजना पर्याप्त छैन लागि संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यागमन प्रयोजनका.
तपाईं, संयुक्त राज्य अमेरिका को आधा जोडी हुनुपर्छ, कम्तीमा अठार वर्ष पुरानो छौं भने एक पुरुष र कम्तिमा सोह्र हुनुहुन्छ भने महिला (तर वृद्ध भने हुनेछ कि यो आवश्यकता मा आफ्नो घर राज्य). आफ्नो जापानी भावि पति हुनु पर्छ कम से कम अठार भने र तपाईं को या त छ तल को उमेर, आमाबाबुको अनुमोदन लागि विवाह । पछि सम्बन्धविच्छेद वा विघटन पछिल्लो विवाह, जापान मा महिला प्रतीक्षा पर्छ कम्तिमा छ महिना विवाह गर्न फेरि । (यो संग के छ स्थापना पहिचान पिता को घटना मा गर्भावस्था को छ।) यदि तपाईं र तपाईंको भावि पति सम्बन्धित छन् द्वारा रगत, ग्रहण, वा अन्य विवाह, तपाईं गर्न अनुमति नहुन सक्छ विवाह अन्तर्गत जापानी व्यवस्था छ । रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिक हो भने, तपाईं तयार हुनुपर्छ निम्न (एक प्रमाणित अनुवाद मा जापानी को कुनै पनि कागजात देखि, संयुक्त राज्य अमेरिका गरेको या त मा जापानी दूतावास संयुक्त राज्य अमेरिका वा एक जापानी नोटरी सार्वजनिक). प्राप्त एक वैध प्रमाणपत्र को आफ्नो विवाह को लागि महत्वपूर्ण छ उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यागमन. संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के हुन्छ ट्रयाक राख्छ कागजातहरू छलफल गर्दै कानुनी रूपमा वैध देखि प्रत्येक देश, जापान समावेश हुनेछ, र तिम्रो तिरस्कार गर्दैन भने आउन उचित स्रोत छ । जाँच राज्य विभाग गरेको देश तालिका प्राप्त गर्न थप विवरण के कागजातहरू जापान देखि यो ठान्नुहुन्छ वैध छ । यदि तपाईं पकड हुनेछ आफ्नो विवाह संयुक्त राज्य अमेरिका मा, तपाईं पालन गर्न आवश्यक कानुन को राज्य जहाँ तपाईं विवाह । तपाईं प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ एक देखि विवाह प्रमाणपत्र, एक स्थानीय सरकारी कार्यालय छ । एक चर्च प्रमाणपत्र, उदाहरणका लागि, पर्याप्त छैन ।.
अचल सम्पत्ति वकिल, कानून कम्पनीहरु को लागि जापान मा हरेक शहर